पोखराको गोली प्रकरण : परिवार भन्छन्,लागु पदार्थ प्रयोगकर्ता भएकै कारण गोली हान्ने अधिकार प्रहरीलाई कस्ले दियो ? « News24 : Premium News Channel
पोखराको गोली प्रकरण : परिवार भन्छन्,लागु पदार्थ प्रयोगकर्ता भएकै कारण गोली हान्ने अधिकार प्रहरीलाई कस्ले दियो ?
पोखरा । पोखरा महानगरपालिका वडा नं १० उत्तम चोकमा बुधबार दिउँसो प्रहरीको गोली लागेर एक जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा पोखरा १० का ३० वर्षीय जोन भन्ने गोबिन्द थापा रहेका छन् । उनलाई लागु पर्दाथ ओसार पसार गर्दै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेको र भाग्न लाग्दा प्रहरीले गोली चलाउन परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।
थापाका साथबाट १५०० थान लागु औषध सुई डाइजापम फेला परेको थियो । गोप्य सुचनाको आधारमा लागु औषध कारोवारीको कारोवार हँदैछ भन्ने सुचना पाएपछि सो स्थानमा प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा प्रहरी माथि जाइलागे पछि प्रहरी गोली चलाउन बाध्य भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी प्रमुख एस.पि. दान बहादुर कार्की बताउनुभयो ।
यता घाइतेका परिवार त्यो मान्न तयार छैनन् । परिवारका अनुसार थापाले लागु पदार्थ बिक्री र प्रयोग नगर्ने गरेको जिकिर गरिरहेका छन् । बिहान ११ बजेर १५ मिनेट जाँदा गोबिन्द खाना खाएर घरबाट निस्किएको र त्यसको ५ मिनेट पनि नबित्दै उनीमाथी गोली प्रहार भएको परिवारको दाबी रहेको छ ।
परिवारका सदस्यका अनुसार १५ जना प्रहरी भएको ठाउँमा एक जना कसरी भाग्न सक्छ ?। गोली चलाउनु पर्ने कुनै अवस्था नरहेको र थापालाई समातेर खुट्टामा गोली हानेको आरोप परिवारले प्रहरीलाई लगाएका छन् । लागु पदार्थ प्रयोगकर्ता भएकै कारण गोली हान्ने अधिकार प्रहरीलाई कस्ले दियो ? भन्दै परिवारले प्रहरीको चर्काे आलोचना गरिरहेका छन् । प्रहरीले थापासँग उनका परिवारलाई भेट्न पनि नदिएको भन्दै परिवारले आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
घाइतेको अहिले पश्चिकाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा उपचार भैरहेको छ । घाइते थापाको बायाँ खुट्टामा गोली लागेको थियो । प्रहरीका अनुसार थापा सन् २०१४ मा कतारमा लागु औषध काण्डमा जेल बसेर २०१८ मा छुटेर नेपाल फर्किएका थिए । सामान्य होटल चलाएर बसेका उनीहरुले प्रहरीको भनाई सरासर झुट भएको र लागु औषध प्रयोगकर्तालाई गोली चलाउने नियम कुन कानुनमा छ भन्दै प्रश्न गरिहेको छन् ।
कतारमा लागु औषध प्रयोग गरेको भए मृत्यु दण्ड हुने भन्दै प्रहरीले अनावश्यक रुपमा गोली चलाएको थापाका परिवारको आरोप रहेको छ । यता थापा सँग रहेका अर्का एक जना फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।